ပလ္လင်လု မလု ပြဿနာ | မေတ္တာရိပ်
← အရိုးကွင်းဆက် ချိတ်ဆက် ပြဿနာ
ဆင်းခံ မြင်းခံ ဘုရား ပြဿနာ →
ပလ္လင်လု မလု ပြဿနာ	Posted on April 24, 2011	by mettayate “ပလ္လင်လု မလု ပြဿနာ”
ဘုရားဖြစ်ခါနီး မာရ်နတ်ရန်ကို အောင်နိုင်သည့် အခန်းကို ရေးကြ၊ ပြောကြသောအခါ များသောအားဖြင့် မာရ်နတ်က ဘုရားလောင်း၏ပလ္လင်ကို လာရောက် လုသည်ဟုသာ ရေးကြ ပြောကြ၏။
အမှန်ကား – ပလ္လင်ကို လာရောက်လုသည် မဟုတ်။ ဘုရား မဖြစ်သမျှ ဤဖွဲ့ခွေထားသော တင်ပလ္လင်ကို မဖျက်အံ့။ (အဘိ- ဋ္ဌ- ၁၊၇၇) ဟူသော အဓိဋ္ဌာန်ကို ပျက်စီးစေရန် လာရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓ၀ံသအဋ္ဌကထာ၊ နှာ- ၃၇၇ ၌ “ဗောဓိသတ္တော တတ္ထစုဒ္ဒသဟတ္ထေ တိဏသန္ထရေ တိသန္ဓိ ပလ္လင်္ကံအာဘုဇိတွာ” ဟု ဖွင့်၏။
အဓိပ္ပါယ်ကား – ဘုရားလောင်းသည် (၁၄) တောင် အပြန့်ကျယ်သော မြက်ခင်းပြင်၌ တိသန္ဓိပလ္လင် (တင်ပလ္လင်) ကို ဖွဲ့ခွေကာ ထိုင်နေတော်မူ၏ ဟု ဖြစ်၏။
[မှတ်ချက်။ တိသန္ဓိ ပလ္လင်္ကံ- သုံးပါးသော အဆက်အစပ်ရှိသော ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေနေထိုင်တော်မူခြင်း – ဟူသည်မှာ ပေါင်နှင့် ဒူးတို့၏ အဆက်အစပ်နှစ်ပါး၊ ပေါင်ရင်းနှင့် ခါးတို့၏ အဆက်အစပ်တစ်ပါး၊ ပေါင်း (၃)ပါး ဖြစ်၏။]
တိဏသန္ထရေ – မြက်အခင်း ဟု ဆိုသောကြောင့် ရတနာစီခြယ်သောပလ္လင် မဟုတ်ကြောင်းမှာ ထင်ရှား၏။ ပွင့်တော်မူတိုင်းသော ဘုရားရှင်တို့၏တူညီသော ဖြစ်စဉ် (ဓမ္မတာ ၃၀) ရှိ၏။ ထို ဓမ္မတာ (၃၀) တို့တွင် နံပါတ် (၉) ဓမ္မတာမှာ –
တိဏသန္ထရေ နိသီဒိတွာ သဗ္ဗညုတဉာဏာဓိဂမော – ဘုရားလောင်းတော်မှန်သမျှ မြက်အခင်းမှာ ထိုင်ရင်း သဗ္ဗေညုတ ဉာဏ်တော်ကို ရကြသည် ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ထိုဓမ္မတာအရ ဂေါတမဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည် မြက်အခင်း၌ ထိုင်နေတော်မူခြင်းသာ ဖြစ်၏။ သီးခြားပလ္လင်ခေါ် (ထိုင်ခုံ) ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။
အကယ်၍ ဤဗုဒ္ဓဂေါတမမှာမှ တစ်ဆယ့်လေးတောင် အမြင့်ဆောင်သော ပလ္လင်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာသည်ဆိုပါက ဆိုခဲ့ပြီးသော ဘုရားလောင်းလျာတို့၏ ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင်နေပေမည်။
ထို့ကြောင့် မာရ်နတ်ပလ္လင်လုသည် ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်ပါဟူ၍ (၀၆.၀၂.၂၀၀၃) နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ကထိကရဟန်းက သုံးပါးရတနာ အဘိဉာဏ်ဖွင့် ဓမ္မကထာ ဆောင်းပါးတွင်း ဖြေရှင်းရေးသားထား၏။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ မှတ်ကျောက်. Bookmark the permalink.	← အရိုးကွင်းဆက် ချိတ်ဆက် ပြဿနာ